FISOKAFAN’NY FREE TV : Ara-dalàna ny rehetra, any amin’ny fanjakana ny baolina | NewsMada
Nanararaotana namerenana ny fitakiana ny fisokafan’ny fahitalavitra Free TV ny fankalazana ny tsingerintaona fahenin’ny onjampeo Free FM ny sabotsy 13 mey lasa teo.
Raha hiverenana, efa tamin’ny 03 desambra 2002 no azo ny fahazoan-dalana hanokatra ny haino aman-jery Free TV. Tamin’izany fotoana, mbola tamin’ny anaran’ny “Technimad Radio-TV”. Nomen’ny tompon’ny Technimad ny orinasa Free Communication io fahazoan-dalana io tamin’ny taona 2011, izay naorina sy tantanan-dRakotondrazafy Andriatongarivo Lalatiana ka nanoloana ny anarana ho lasa “Free FM” nanomboka ny 13 mey 2011. Amin’ny maha tsy azo sarahina ny fahazoan-dalana, nisy ny fifanarahana tamin’ny tompon’ny Technimad mba hanomezany koa ny fahazoan-dalana hanokatra ny fahitalavitra ho an’ny Free Communication. Natao teo anatrehan’ny mpirakidraharaha (notaire) izany rehetra izany ny volana janoary 2015. Nampahafantarina ny minisiteran’ny Serasera avokoa izany rehetra izany.
Mba hahafaha-manomboka ny fandefasana ny fahitalavitra, ny dingana amin’ny fahazoana maridrefy avy amin’ny ARTEC (Autorité de Régulation des Télécommunications, OMERT teo aloha) sisa no andrasan’ny Free TV. Taorian’ny fifanatonana maromaro tamin’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny teo anivon’ny minisiteran’ny Serasera, nisy ny taratasy nalefa teo anivon’ny “commission spéciale à la communication audiovisuelle” mba tsy handavan’izy ireo ny fahazoana izany maridrefy (avis de non-objection) ahafaha-mandefa ny fahitalavitra izany. Samy nampanantena izany taratasy tsy fandavana izany avokoa ireo minisitra roa nisesy teo aloha, Reboza Cyrille sy Razafindambo Andrianjato Vonison.
Rehefa nanontanian’ireo solombavambahoaka teo anivon’ny antenimierampirenena nandritra ny fihaonan’izy ireo tamin’ny mpikambana eo anivon’ny governemanta, nampanantena teo imasom-bahoaka andriamatoa Andrianjato Vonison fa kely sisa dia handeha ny fahitalavitra Free TV. Efa nisy ny dingana marobe natao, hatramin’ny fandefasana taratasy ho an’ny praiminisitra lehiben’ny governemanta tamin’izany fotoana, ny jeneraly Ravelonarivo Jean. Nisy ny fihaonana tamin’ity farany sy ny tompon’andraikitra teo anivon’ny Free Communication mba hamelabelarana mikasika io antontan-taratasy io sy ny mba hahazoana manokatra ny fahitalavitra. Tsy mbola nisy anefa ny dingana nataon’ny fanjakana hatreto, noho ny antony tsy fantatra mazava.
Nahafaha-nanararaotra ny fangatahana ilay taratasy tsy fandavana ahazoana ny maridrefy andefasana ny Free TV avy amin’ny C.S.C.A. indray ny fanovana tamin’ny tomponandraikitra teo anivon’ny minisiteran’ny Serasera. Namerina ny fanomezan-toky fa hanatanteraka ny lalàna misy sy mihatra amin’ny tontolon’ny serasera, indrindra fa ny bokin’andraikitra, ity fahitalavitra ity.
Tsy fangatahana amboniny no nataon’ny Free Communication, araka izany, fa zo amin’ny fitantanana mitovy tsy misy tombo sy hala. Nandritra ny fitondrana Rajaonarimampianina ihany koa, onjampeo sy fahitalavitra an’ny mpandraharaha akaiky ny fitondrana no nahazo alalana hiasa, nefa raha ny tokony ho izy, efa tamin’ny taona 2012 no tsy tokony ho nisy nahazo izany alalana izany intsony.
Ny fahazoana izany alalana izany dia tokony tsy hisy ifandraisany amin’ny fitondrana misy.
Nisy, araka izany, ny fanangonan-tsonia atao amin’ny Malagasy, izay mbola mandala ny fahafahana sy ny miady mba hisian’ny fahalalahana maneho hevitra, nanomboka ny alatsinainy 15 mey lasa 2017 mba anohanana ny fangatahana indray ny hanokafana ny fahitalavitra Free TV. Antsoina, araka izany, ny olom-pirenena rehetra mba ho tonga hanao izany sonia izany ao amin’ny foiben’ny Free FM, Pradon Trade Center, Antanimena.
Izay sonia voaangona dia alefa miaraka amin’ny taratasy fangatahana izany fahafahana mandefa ny fahitalavitra izany ho an’ny minisitry ny Serasera, Atoa Rahajason Harry Laurent, izay mahafantatra tsara io antontan-taratasy io, ary efa niady izany tamin’ny taona 2014-2015 nandritra ny fanaovany fanadihadiana matetika tao amin’ny onjampeo Free FM 104.2.
Ny vondrona Free Communication dia misaotra ireo izay efa namaly ny antso tamin’izany fanangonan-tsonia izany ary mbola miantso hatrany ireo izay manohana ny fahafahana sy ny fahalalahana maneho hevitra. Toraka izany koa ny Holafitry ny mpanao gazety malagasy, eto amin’ny faritanin’Antananarivo, izay efa nampanantena fa hanohana azy amin’izay dingana atao rehetra.
Antananarivo, 15 mey 2017
Ny tale jeneralin’ny Free Communication